MC nylon tsvimbo zvakanakira |
MC nylon tsvimbo, inozivikanwawo seyakakandirwa nylon tsvimbo, imhando yezvinhu zvakaumbwa zvisingaite, c6h11no, inova yakanyungudutswa mbishi zvinhu, iyo inoshandisa zvinhu zvekutanga sechibatiso. MC nylon tsvimbo uye activator uye zvimwe zvinowedzerwa zvinogadzirwa kuita monomer kuti ive nepolymerized yakananga muforoma preheated kune imwe tembiricha. Izvo zvinhu zvinowaniswa polymer nekukurumidza muforoma uye zvinokomberedzwa kuita yakaoma solid embryo. Mushure meakakodzera maitiro ekurapa, yakatemerwa bhaa inowanikwa. "Plastiki panzvimbo yesimbi, kuita kwakanakisa", inoshandiswa zvakanyanya. MC nylon tsvimbo yakaitwa yechena, nhema, bhuruu, girini, beige ndiro uye nylon. Nylon tsvimbo ine yakanaka makemikari kugadzikana: haina kukanganiswa nemakemikari, senge doro, isina simba base, mhangura, ester uye hydrocarbon mafuta. Nylon tsvimbo ine yakanakisa kutonhora uye kupisa kupisa.
Mechanical mashandiro zvakare akanaka kwazvo: uye ine yakasimba tensile, pamusoro kuomarara, kukotama simba uye kukanganisa simba uye yakakwira ductility, inokodzera hombe dzimba dzemidziyo, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekugadzira michina, zvishandiso, zvemagetsi zvikamu. Zvikamu, senge mabheyaringi, magiya, zvinomomesa pombi, mafeni mafeni, gasket risingapindirani nemafuta, zvikamu zvevharuvhu, chinwiwa uye michina yekudya, zvakagadzirwa nezvipfeko zvinodzivirira, zvinokanganisa kusagadzikana, kwete glue, hutsanana uye zvisina-chepfu zvigadzirwa zvekugadzira mashopu, kuendesa screws, yakapusa kuchenesa, hupenyu hwakareba, anti mildew maitiro, uye inogona zvakare kushandiswa seimwe zvimwe zvekuchengetedza zvigadzirwa, zita bushing, nezvimwe.
MC nylon tsvimbo ine kuomarara kwakanaka, kupfeka kuramba, kuramba mafuta, kudedera kwekusimudzira, kusimba uye kukotama kwesimba, kunwa kwemvura kwakadzika uye kudzikama kwakanaka. Ivo anoshandiswa kugadzirisa akasiyana epamusoro masimba ekupfeka-asingagone zvikamu. Chigadzirwa chine huwandu hwakawanda hwekushandisa. Ipurasitiki uye simbi yemhando yepamusoro, simbi, mhangura uye zvimwe zvinhu zvesimbi. Iyo yakakosha michina michina yekukanda nylon upamhi mainjiniya mapurasitiki, kwete kupfeka zvikamu, kwete mhangura uye chiwanikwa, nekuti ndiko kupfeka kwemidziyo. Senge turbine, giya, inotakura, impeller, crank, chiridzwa pani, dhiraivha shaft, blade uye sikuruu, yekumanikidza vharafu, washer, sikuruwa, nzungu, chisimbiso, shuttle uye sleeve, ruoko ruoko chinobatanidza chinogona kuitwa cheMic nylon tsvimbo.
Post nguva: Aug-05-2020